घरमा बसेर कोरोनाको उपचार कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस् के खाने, के नखाने ? | DNFMEDIA
घरमा बसेर कोरोनाको उपचार कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस् के खाने, के नखाने ?
काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतमा ताण्डव मच्चिरहेको छ । नेपालमा पनि दैनिक रुपमा कोरोनाका संक्रमित बढ्ने क्रम जारी छ । दोस्रो चरणमा कोरोनाको संक्रमण अत्यधिक तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । कोरोनाको गम्भीर मामिलामा बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ तर हल्का वा मध्यम मामिलामा घरमा बसेर नै यसको उपचार गर्न सकिन्छ । यसलाई होम आइसोलेशन पनि भनिन्छ । होम आइसोलेशनमा बिरामीले आफूलाई घरका अन्य सदस्यभन्दा अलग राखेर आफ्नो उपचार गराउने गर्छन् । कोरोनाका बिरामीले घरमा बसेर कसरी निको हुन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिऔं ।
शौचालय जानु अघि र पछि, खाना बनाउनु अघि र पछि आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । बिरामीको र्‍याल, थूक र हाँच्छिउको सीधा सम्पर्कमा आउनबाट जोगिनुहोस् । बिरामीले प्रयोग गरेका कुनै पनि वस्तु नछुनुहोस् । बिरामीलाई खाना दिने बेला उनको सिधा सम्पर्कमा नआउनुहोस् । खाना कुनै स्टुल वा टेबलमा राखिदिनुहोस् । बिरामीद्वारा प्रयोग भाँडा उठाउने बेला डिस्पोजेबल ग्लव्स लगाउनुहोस् । बिरामीको कोठा, शौचालयको सतहलाई हरेक दिन स्यानिटाइज गर्नुहोस् । एजेन्सी
Previous: आज काठमाडौं र ललितपुरका नेपाल पक्षीय पदाधिकारीको शपथ ग्रहण
Next: भारतमा २४ घण्टामा रेकर्ड २.१६ लाख संक्रमित, १ हजार बढीको मृत्यु